तर त्यसपछि जे भयो, त्यो उनले पत्याउनै सकेनन्…. – Dailny NpNews
तर त्यसपछि जे भयो, त्यो उनले पत्याउनै सकेनन्….
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २६, २०७७ समय: १२:१९:०५
देवयान रोय भारतीय पत्रकार हुन् । उनी वकील समेत हुन् । उनी पत्रकारीतामा कानूनी विटमा कलम चलाउँछन् । उनी बाटोमा हिड्दै गर्दा एक चोरले उनको फोन लिएर गयो । उनी चोरको पछिपछि दौडिए । एकछिन पछि त्यो चोर फर्केर आयो र चोरेको फोन राख्दै अलिक राम्रो फोन बोक्नु पर्दैन भनि राखेर गयो । ती पत्रकारले यस्तो घटना बारे ट्वीटरमा बताएका छन् ।
उनका अनुसार फोन खो से को केही बेरपछि चोरले फोन फिर्ता दिए किनभने फोनको मोडल वान प्लस नाइन प्रो थिएन । यो अचम्मको स्थितिको सामना गरेको ट्वीटर प्रयोगकर्ता देबायान रोयले यो विषयमा पोस्ट पनि सेयर गरेका छन् । पोस्टमा उनले दिएको जानकारी अनुसार उनी भारतको नोएडा सेक्टर ५२ मेट्रो स्टेशन नजिकै आफ्नो फोनमा च्याट गरिरहेका थिए । त्यतिबेला का लो मा स्क लगाएका एक व्यक्ति उनको फोन खो से र भा गे ।
यसै कारण उनी केही बेरका लागि के गर्ने के नगर्ने भए ।केही बेरपछि जब उनलाई से न्स आयो तब उनी चोरको पछाडि भा गे । तर त्यसपछि जे भयो, त्यो उनले पत्याउनै सकेनन् । जब उनी चोरको पछाडि दौडि रहेका थिए तब चोर भा ग्नु को साटो पछाडि फर्किएर उनी भएठाउँ नै आए । देबायनको अगाडि आएर उनले भने, ‘मलाई लाग्यो वान प्लस ९ प्रो मोडल हो ।’ यति भनेर उनले फोन भुइँमा राखे र त्यसपछि पुनः भा गे । सांकेतिक तस्वीर